နန္ဒဝန်ကျောင်းကြီး ဆရာတော်ကြီး၏ ဈေးရောင်းကောင်းစေသောနည်း - CeleLove
နန္ဒဝန်ကျောင်းကြီး ဆရာတော်ကြီး၏ ဈေးရောင်းကောင်းစေသောနည်း
March 18, 2020 CeleLove ဗေဒင်ကဏ္ဍ 0
မိမိရောင်းလိုသော ကုန် အမြန် ထွက်ရန်
တနင်္ဂနွေ နံ ဖြစ်သော အိုး အုန်းသီး အိမ် အုတ် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နေသူများဖြစ်ပါက တနင်္ဂနွေနံကုန်ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်စေရန်
မိမိ ရောင်းလိုသော ပစ္စည်ပေါ်တွင် အဂ်ါ အခါမှာ ( သြ ) ဟူ၍ ရေးသားပါ ပြီး လျှင် အရှေ့တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ သြဇာ ၂၁ ညွန့် ဖြင့် ၂၁. ချက်တိတိ မိမိ ရောင်းလိုသည့် ပစ္စည်း အမြန် ထွက်ပါစေ ပြေားရိူက်ပါ မိမိ နေအိမ် တနဂ်နွေ သားသမီး မရှိမှ ပြုလုပ်ပါ ထူးထူးခြားခြား ရောင်းကောင်းလာသည် တွေ့ရပါ လိမ့်မည် …။
နေ့ အလိုက် အဂ်ါအခါများ
တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ၃နာရီ ၄ ခွဲအတွင်း
တနင်္လာနေ့ နံနက်၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း
အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၆. နာရီ ၇ ခွဲ အတွင်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခွဲ အတွင်း
ကြာသပတေးနေ့ ၇. ခွဲ ၉. နာရီ အတွင်း
သောကြာနေ့ ၁ နာရီ ခွဲ ၃ နာရီ အတွင်း
စနေနေ့ ၉. နာရီ ၁၀ ခွဲ အတွင်း အထက်ပါ အချိန်များသည် အင်္ဂါအခါများ ဖြစ်သည် ထိုအခါ များ တွင် ပြုလုပ်ကြရပါမည် …။
တနင်္လာနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်စေရန်
ကွမ်းသီး ကွမ်း ငရုတ် ကြိမ် ကြက်သွန်ဖြူ နီ ငံပြာရည် ငပိ ငခြောက် ကြာဇံ ခေါက်ဆွဲထုပ် ဂျုံမူန့် စသည့် တနလ်ာနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေရန် မိမိ ရောင်းလိုသော တနင်္လာနံ ပစ္စည်းပေါ် မှာ ကြာသပတေး အခါ၌ ( င. ) အက္ခရာရေးသား ပါ ရေးသားပြီးလျှင် အနောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ ကင်ပွန်း ၁၀ ညွန့် ဖြင့် ၁၀ ချက် ရိုက်ပါ ထူးထူးခြားခြား ရောင်းကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရပါ လိမ့်မည် …။
မိမိအိမ်က မိမိက တနင်္လာသားသမီး ဖြစ်လျှင် မပြုလုပ်ရ
ဓာက်ရိုက်ရန် ကြာသပတေး အခါများ
တနင်္ဂနွေနေ့ ၁ နာရီ ၃ နာရီအတွင်း
တနင်္လာနေ့ ၉. နာရီ ၁၀ ခွဲ အတွင်း
အင်္ဂါနေ့ ၃. နာရီ ၄. ခွဲ အတွင်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း
ကြာသပတေးနေ့ ၆ နာရီ ၇ ခွဲ အတွင်း
သောကြာနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခွဲ အတွင်း
စနေနေ့ ၇ ခွဲ ၉ နာရီ အတွင်း
အင်္ဂါနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်စေရန်
ဆန် ဆီ ဆေး ဆား စောင် စသည် ပစ္စည်းမျာ မိမိ ရောင်းလိုသော အဂ်ါနံ ပစ္စည်းပေါ်မှာ တနင်္ဂနွေ အခါ၌ ( ည. ) အက္ခရာ ရေးသားပါ ပြီး အရှေ့မြောက်အရပ် လှည့်၍ ဆန်အိတ် သေးသေး နှင့် ဖြစ်စေ စိမ်းစားဥ ဖြင့် ဖြစ်စေ ၆ ချက် ရိူက်ပါလေ နေ့စဉ် တနင်္ဂနွေ အခါ၌ ပြုလုပ်ရမည် ထူးထူးခြားခြား ရောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မည် …။
နေ့အလိုက် တနင်္ဂနွေ အခါများ
တနင်္ဂနွေ နေ့ မနက် ၆ နာရီ ၇ ခွဲ
တနင်္လာနေ့ ၁၂. နာရီ ၁. ခွဲ အတွင်း
အင်္ဂါနေ့ ၇. ခွဲ ၉. နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁ ခွဲ ၃. နာရီ
ကြာသပတေး နေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ
သောကြာနေ့ ၃. နာရီ ၄. ခွဲ
စနေနေ့ ၁၀. ခွဲ ၁၂. အတွင်း
ဗုဒ္ဓဟူးနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန် ရောင်းထွက်စေရန်
ယပ်တောင် ဝါး လှေ ရွှေ စသည် ဗုဒ္ဓဟူးနံ လူ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း များ အမြန်ရောင်း ထွက်စေ လိုသော် မိမိရောင်းလိုသော ဗုဒ္ဓဟူးနံ ပစ္စည်းပေါ် မှာ ( ဝ) အက္ခရာ ရေးသား ဗုဒ္ဓဟူးအခါ တွင် ပြီး အနောက်မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ ရွက်လှ ၁၅ ညွန့် ဖြင့် ၁၅ ချက် ရိူက်ပါ နေ့စဉ် ရာဟု အခါပိုင်းများ ရောက်လျင် ပြူလုပ်ပေးပါ ထူးထူး ခြားခြား ရောင်းကောင်းလာပါ လိမ့်မည် …။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပိုင်း အများခေါ် ရာဟု အခါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၄ နာရီ ၇ ခွဲ အတွင်း
တနင်္ဂနွေနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ
တနင်္လာနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခွဲ
အင်္ဂါနေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း
ကြာသပတေးနေ့ ၁၂ ခွဲ ၁ နာရီခွဲ
သောကြာနေ့ ၇ ခွဲ ၉ နာရီအတွင်း
စနေနေ့ ၁ နာရီခွဲမှ ၃ နာရီ အတွင်း
ကြာသပတေးနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန် ရောင်းထွက်စေရန်
ဘိလပ်မြေအိတ် ပန်း ပြောင်း မြေပဲ မှန် မီးသီး ဖုန်း စသည် ကြာသပတေးနံ ပစ္စည်းများ ရောင်းထွက်စေ လိုသော် မိမိ ရောင်းလိုသော ကြာသပတေးနံ ပစ္စည်းပေါ်မှာ တနင်္လာ အခါ၌ ( မ. ) အက္ခရာ ရေးသား၍ အရှေ့အရပ်သိူ့ မျက်နှာမူ၍မည်ကျည်း ၈ ညွန့် ဖြင့် ၈. ချက် ရိူက်ပါ တနင်္လာ အခါ ရောက်တိုင်း နေ့စဉ် ပြုလုပ်ပေးပါ ထူးထူး ခြားခြား ရောင်းကောင်း လာပါလိမ့်မည် …။
မိမိ အိမ်ကြာသပတေးသားသမီး ရှိလျှင် မပြုလုပ်ရ
ဓာက်ရိုက်ရန် နေ့အလိုက် တနလ်ာ အခါများ
တနင်္ဂနွေ နေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂. အတွင်း
တနင်္လာနေ့ ၆ နာရီ ၇. ခွဲ အတွင်း
အင်္ဂါနေ့ ၁၂. နာရီ ၁. ခွဲ အတွင်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၇. ခွဲ ၉ နာရီ အတွင်း
ကြာသပတေးနေ့ ၁ ခွဲ ၃. နာရီအတွင်း
သောကြာနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ
စနေနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခွဲ အတွင်း
သောကြာနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန် ရောင်းထွက်စေရန်
သဲ သံ သွပ် သစ်သား သကြား စသည့် လူအသုံး အဆောင် သောကြာနံ သင့် ပစ္စည်းများ အမြန်ဆုံး ရောင်းထွက် စေရန် မိမိ ရောင်းလိုသော သောကြာနံ ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ် တွင် ( ဠ. ) အက္ခရာ စနေအခါ တွင် ရေးသားပါ ပြီး လျှင် သနပ်ကိုင်း ၁၇ ညွန့်ဖြင့် ၁၇. ချက် ရိူက်ပါလေ စနေအခါ၌ ရိူက်ရမည် စနေအခါ ရောက်တိုင်း နေ့စဉ် ပြုလုပ်ပေးပါ ထူးထူးခြားခြား ရောင်းကောင်းလာပါ လိမ့်မည် …။
မိမိအိမ်မှာ သောကြာသားသမီး ရှိလျှင် မိမိက သောကြာ သားသမီး ဖြစ်လျှင် ဓာက်မရိုက်ရ
နေ့ အလိုက် ဓာက်ရိူက်ရန် စနေအခါများ
တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခွဲ အတွင်း
တနင်္လာ နေ့ ၇ ခွဲ ၉ နာရီ အတွင်း
အင်္ဂါနေ့ ၁. ခွဲ ၃. နာရီ အတွင်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ အတွင်း
ကြာသပတေးနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခွဲ အတွင်း
သောကြာနေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း
စနေနေ့ ၆ နာရီ ၇ ခွဲ အတွင်း
စနေနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်စေရန်
ထီး ဓား ထန်းလျက် ဒန်အိုး ဒန်ခွက် တိုက် စသည့်စနေနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ဆုံး ရောင်း ထွက်စေရန် မိမိ ရောင်းလိုသော စနေနံသင့် ပစ္စည်းပေါ် မှာ သောကြာ အခါ၌ ( န. ) အက္ခရာ ရေးသားပါ ပြီး မြောက်အရပ်သို့ မျက်နှာ မူ၍ ဒဟတ်ကိုင်း ၁၉ ညွန့်ဖြင့် ၁၉ ချက် ရိူက်ပါလေ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးပါ ထူးထူးခြားခြား ရောင်း ကောင်း လာပါလိမ့်မည် …။
စနေသာသမီး ရှိလျှင် မိမိက စနေသားသမီးဆိုလျှင် မပြုလုပ်ရ
ဓာက်ရိုက်ရန် နေ့အလိုက် သောကြာ အခါများ
တနင်္ဂနွေနေ့ ၇ ခွဲ ၉ နာရီ အတွင်း
တနင်္လာနေ့ ၁ နာရီ ၃ အတွင်း
အင်္ဂါနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ အတွင်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခွဲ
ကြာသပတေးနေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း
သောကြာနေ့ ၆ နာရီ ၇ ခွဲအတွင်း
စနေနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခွဲ အတွင်း
နန္ဒဝန်ကျောင်းကြီးဆရာတော် ရေးသားသောဗေဒမကုဋမာလာ အင်္ဂဝိဇ္ဇာကျမ်းကြီး မှ အများသူငါ နားလည် ရှင်လင်းစေရန် ရေးသားထားပါသည် …။ ။
နန်ဒဝနျကြောငျးကွီး ဆရာတျောကွီး၏ စြေးရောငျးကောငျးစသေောနညျး
မိမိရောငျးလိုသော ကုနျ အမွနျ ထှကျရနျ
တနင်ျဂနှေ နံ ဖွဈသော အိုး အုနျးသီး အိမျ အုတျ အရောငျးအဝယျ ပွုလုပျနသေူမြားဖွဈပါက တနင်ျဂနှနေံကုနျပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျစရေနျ
မိမိ ရောငျးလိုသော ပစ်စညျပျေါတှငျ အဂျါ အခါမှာ ( သွ ) ဟူ၍ ရေးသားပါ ပွီး လြှငျ အရှတေ့ောငျအရပျကို မကျြနှာမူ၍ သွဇာ ၂၁ ညှနျ့ ဖွငျ့ ၂၁. ခကျြတိတိ မိမိ ရောငျးလိုသညျ့ ပစ်စညျး အမွနျ ထှကျပါစေ ပွေားရိူကျပါ မိမိ နအေိမျ တနဂျနှေ သားသမီး မရှိမှ ပွုလုပျပါ ထူးထူးခွားခွား ရောငျးကောငျးလာသညျ တှရေ့ပါ လိမျ့မညျ …။
နေ့ အလိုကျ အဂျါအခါမြား
တနင်ျဂနှနေေ့ ညနေ ၃နာရီ ၄ ခှဲအတှငျး
တနင်ျလာနေ့ နံနကျ၁၀ ခှဲ ၁၂ အတှငျး
အင်ျဂါနေ့ နံနကျ ၆. နာရီ ၇ ခှဲ အတှငျး
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခှဲ အတှငျး
ကွာသပတေးနေ့ ၇. ခှဲ ၉. နာရီ အတှငျး
သောကွာနေ့ ၁ နာရီ ခှဲ ၃ နာရီ အတှငျး
စနနေေ့ ၉. နာရီ ၁၀ ခှဲ အတှငျး အထကျပါ အခြိနျမြားသညျ အင်ျဂါအခါမြား ဖွဈသညျ ထိုအခါ မြား တှငျ ပွုလုပျကွရပါမညျ …။
တနင်ျလာနံ ကုနျပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျစရေနျ
ကှမျးသီး ကှမျး ငရုတျ ကွိမျ ကွကျသှနျဖွူ နီ ငံပွာရညျ ငပိ ငခွောကျ ကွာဇံ ခေါကျဆှဲထုပျ ဂြုံမူနျ့ စသညျ့ တနလျာနံ ပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျ စရေနျ မိမိ ရောငျးလိုသော တနင်ျလာနံ ပစ်စညျးပျေါ မှာ ကွာသပတေး အခါ၌ ( င. ) အက်ခရာရေးသား ပါ ရေးသားပွီးလြှငျ အနောငျအရပျကို မကျြနှာမူ၍ ကငျပှနျး ၁၀ ညှနျ့ ဖွငျ့ ၁၀ ခကျြ ရိုကျပါ ထူးထူးခွားခွား ရောငျးကောငျးလာသညျကို တှရေ့ပါ လိမျ့မညျ …။
မိမိအိမျက မိမိက တနင်ျလာသားသမီး ဖွဈလြှငျ မပွုလုပျရ
ဓာကျရိုကျရနျ ကွာသပတေး အခါမြား
တနင်ျဂနှနေေ့ ၁ နာရီ ၃ နာရီအတှငျး
တနင်ျလာနေ့ ၉. နာရီ ၁၀ ခှဲ အတှငျး
အင်ျဂါနေ့ ၃. နာရီ ၄. ခှဲ အတှငျး
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ၁၀ ခှဲ ၁၂ အတှငျး
ကွာသပတေးနေ့ ၆ နာရီ ၇ ခှဲ အတှငျး
သောကွာနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခှဲ အတှငျး
စနနေေ့ ၇ ခှဲ ၉ နာရီ အတှငျး
အင်ျဂါနံ ကုနျပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျစရေနျ
ဆနျ ဆီ ဆေး ဆား စောငျ စသညျ ပစ်စညျးမြာ မိမိ ရောငျးလိုသော အဂျါနံ ပစ်စညျးပျေါမှာ တနင်ျဂနှေ အခါ၌ ( ည. ) အက်ခရာ ရေးသားပါ ပွီး အရှမွေ့ောကျအရပျ လှညျ့၍ ဆနျအိတျ သေးသေး နှငျ့ ဖွဈစေ စိမျးစားဥ ဖွငျ့ ဖွဈစေ ၆ ခကျြ ရိူကျပါလေ နစေ့ဉျ တနင်ျဂနှေ အခါ၌ ပွုလုပျရမညျ ထူးထူးခွားခွား ရောငျးကောငျးလာပါလိမျ့မညျ …။
နအေ့လိုကျ တနင်ျဂနှေ အခါမြား
တနင်ျဂနှေ နေ့ မနကျ ၆ နာရီ ၇ ခှဲ
တနင်ျလာနေ့ ၁၂. နာရီ ၁. ခှဲ အတှငျး
အင်ျဂါနေ့ ၇. ခှဲ ၉. နာရီ
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ၁ ခှဲ ၃. နာရီ
ကွာသပတေး နေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခှဲ
သောကွာနေ့ ၃. နာရီ ၄. ခှဲ
စနနေေ့ ၁၀. ခှဲ ၁၂. အတှငျး
ဗုဒ်ဓဟူးနံ ကုနျပစ်စညျးမြား အမွနျ ရောငျးထှကျစရေနျ
ယပျတောငျ ဝါး လှေ ရှေ စသညျ ဗုဒ်ဓဟူးနံ လူ အသုံးအဆောငျ ပစ်စညျး မြား အမွနျရောငျး ထှကျစေ လိုသျော မိမိရောငျးလိုသော ဗုဒ်ဓဟူးနံ ပစ်စညျးပျေါ မှာ ( ဝ) အက်ခရာ ရေးသား ဗုဒ်ဓဟူးအခါ တှငျ ပွီး အနောကျမွောကျအရပျကို မကျြနှာမူ၍ ရှကျလှ ၁၅ ညှနျ့ ဖွငျ့ ၁၅ ခကျြ ရိူကျပါ နစေ့ဉျ ရာဟု အခါပိုငျးမြား ရောကျလငျြ ပွူလုပျပေးပါ ထူးထူး ခွားခွား ရောငျးကောငျးလာပါ လိမျ့မညျ …။
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ညနပေိုငျး အမြားချေါ ရာဟု အခါ
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ညနေ ၄ နာရီ ၇ ခှဲ အတှငျး
တနင်ျဂနှနေေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခှဲ
တနင်ျလာနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခှဲ
အင်ျဂါနေ့ ၁၀ ခှဲ ၁၂ အတှငျး
ကွာသပတေးနေ့ ၁၂ ခှဲ ၁ နာရီခှဲ
သောကွာနေ့ ၇ ခှဲ ၉ နာရီအတှငျး
စနနေေ့ ၁ နာရီခှဲမှ ၃ နာရီ အတှငျး
ကွာသပတေးနံ ကုနျပစ်စညျးမြား အမွနျ ရောငျးထှကျစရေနျ
ဘိလပျမွအေိတျ ပနျး ပွောငျး မွပေဲ မှနျ မီးသီး ဖုနျး စသညျ ကွာသပတေးနံ ပစ်စညျးမြား ရောငျးထှကျစေ လိုသျော မိမိ ရောငျးလိုသော ကွာသပတေးနံ ပစ်စညျးပျေါမှာ တနင်ျလာ အခါ၌ ( မ. ) အက်ခရာ ရေးသား၍ အရှအေ့ရပျသိူ့ မကျြနှာမူ၍မညျကညျြး ၈ ညှနျ့ ဖွငျ့ ၈. ခကျြ ရိူကျပါ တနင်ျလာ အခါ ရောကျတိုငျး နစေ့ဉျ ပွုလုပျပေးပါ ထူးထူး ခွားခွား ရောငျးကောငျး လာပါလိမျ့မညျ …။
မိမိ အိမျကွာသပတေးသားသမီး ရှိလြှငျ မပွုလုပျရ
ဓာကျရိုကျရနျ နအေ့လိုကျ တနလျာ အခါမြား
တနင်ျဂနှေ နေ့ ၁၀ ခှဲ ၁၂. အတှငျး
တနင်ျလာနေ့ ၆ နာရီ ၇. ခှဲ အတှငျး
အင်ျဂါနေ့ ၁၂. နာရီ ၁. ခှဲ အတှငျး
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ၇. ခှဲ ၉ နာရီ အတှငျး
ကွာသပတေးနေ့ ၁ ခှဲ ၃. နာရီအတှငျး
သောကွာနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခှဲ
စနနေေ့ ၃ နာရီ ၄ ခှဲ အတှငျး
သောကွာနံ ကုနျပစ်စညျးမြား အမွနျ ရောငျးထှကျစရေနျ
သဲ သံ သှပျ သဈသား သကွား စသညျ့ လူအသုံး အဆောငျ သောကွာနံ သငျ့ ပစ်စညျးမြား အမွနျဆုံး ရောငျးထှကျ စရေနျ မိမိ ရောငျးလိုသော သောကွာနံ ပစ်စညျးတဈခုခုပျေါ တှငျ ( ဠ. ) အက်ခရာ စနအေခါ တှငျ ရေးသားပါ ပွီး လြှငျ သနပျကိုငျး ၁၇ ညှနျ့ဖွငျ့ ၁၇. ခကျြ ရိူကျပါလေ စနအေခါ၌ ရိူကျရမညျ စနအေခါ ရောကျတိုငျး နစေ့ဉျ ပွုလုပျပေးပါ ထူးထူးခွားခွား ရောငျးကောငျးလာပါ လိမျ့မညျ …။
မိမိအိမျမှာ သောကွာသားသမီး ရှိလြှငျ မိမိက သောကွာ သားသမီး ဖွဈလြှငျ ဓာကျမရိုကျရ
နေ့ အလိုကျ ဓာကျရိူကျရနျ စနအေခါမြား
တနင်ျဂနှနေေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခှဲ အတှငျး
တနင်ျလာ နေ့ ၇ ခှဲ ၉ နာရီ အတှငျး
အင်ျဂါနေ့ ၁. ခှဲ ၃. နာရီ အတှငျး
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခှဲ အတှငျး
ကွာသပတေးနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခှဲ အတှငျး
သောကွာနေ့ ၁၀ ခှဲ ၁၂ အတှငျး
စနနေေ့ ၆ နာရီ ၇ ခှဲ အတှငျး
စနနေံ ကုနျပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျစရေနျ
ထီး ဓား ထနျးလကျြ ဒနျအိုး ဒနျခှကျ တိုကျ စသညျ့စနနေံ ပစ်စညျးမြား အမွနျဆုံး ရောငျး ထှကျစရေနျ မိမိ ရောငျးလိုသော စနနေံသငျ့ ပစ်စညျးပျေါ မှာ သောကွာ အခါ၌ ( န. ) အက်ခရာ ရေးသားပါ ပွီး မွောကျအရပျသို့ မကျြနှာ မူ၍ ဒဟတျကိုငျး ၁၉ ညှနျ့ဖွငျ့ ၁၉ ခကျြ ရိူကျပါလေ နစေ့ဉျပွုလုပျပေးပါ ထူးထူးခွားခွား ရောငျး ကောငျး လာပါလိမျ့မညျ …။
စနသောသမီး ရှိလြှငျ မိမိက စနသေားသမီးဆိုလြှငျ မပွုလုပျရ
ဓာကျရိုကျရနျ နအေ့လိုကျ သောကွာ အခါမြား
တနင်ျဂနှနေေ့ ၇ ခှဲ ၉ နာရီ အတှငျး
တနင်ျလာနေ့ ၁ နာရီ ၃ အတှငျး
အင်ျဂါနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခှဲ အတှငျး
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခှဲ
ကွာသပတေးနေ့ ၁၀ ခှဲ ၁၂ အတှငျး
သောကွာနေ့ ၆ နာရီ ၇ ခှဲအတှငျး
စနနေေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခှဲ အတှငျး
နန်ဒဝနျကြောငျးကွီးဆရာတျော ရေးသားသောဗဒေမကုဋမာလာ အင်ျဂဝိဇ်ဇာကမျြးကွီး မှ အမြားသူငါ နားလညျ ရှငျလငျးစရေနျ ရေးသားထားပါသညျ …။ ။
အပျိုတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းနေကြောင်း ခန္ဓာကိုယ်ကဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၃) ခု…